Iindaba-Ngaba iya kuba yintsholongwane ye-corona
Inoveli yeCorona inikwe ingxelo eNgilane, eMzantsi Afrika naseNigeria ukusukela kweyoMnga. Amazwe amaninzi kwihlabathi liphendule ngokukhawuleza, kubandakanya nokuvalwa kweenqwelomoya ezivela e-UK nase Mzantsi Afrika, ngelixa iJapan ibhengeze ukuba izokumisa ukwamkelwa kwabantu bamanye amazwe ukuqala ngoMvulo.
Ngokwezibalo ezikhutshwe yiYunivesithi yaseJohns Hopkins eMelika, inani lezehlo ze-COVID-19 ligqithile kwizigidi ezingama-80 kwaye inani labantu abaswelekileyo lingaphezulu kwe-1.75 yezigidi ukusukela kwixesha laseCawe Beijing.
Ayimangalisi into yokuba inoveli yeCorona iguqukile, kuba intsholongwane ye-RNA ekuyo inenqanaba lokutshintsha ngokukhawuleza. Inoveli yeCorona intsholongwane izinzile kunezinye iintsholongwane ze-RNA ezinjengeentsholongwane zomkhuhlane. Inoveli yeCorona intsholongwane iguquka kancinci kancinci kuneentsholongwane zomkhuhlane, ngokutsho kwesazinzulu esiyintloko se-WHO uSumiya Swaminathan.
Inoveli yeCorona yokutshintsha kwentsholongwane sele ixeliwe. NgoFebruwari, umzekelo, abaphandi bafumanisa intsholongwane ye-Corona enzima kunye ne-D614G yeenguqu ezazisasazeka kakhulu eYurophu naseMelika. Olunye uphononongo lufumanise ukuba intsholongwane ene-D614G iyatshintsha.
Ngaphandle kokutshintsha kwemfuza okuninzi kwintsholongwane ukusukela oko kwaqhambuka ukuqhambuka kwe-COVID-19, akukho nanye kwezi zinto zaziwayo, kubandakanya ne-UK, ethe yabanegalelo elibonakalayo kwiziyobisi, kunyango, kuvavanyo okanye kwizitofu zokugonya, utshilo ingcali ye-WHO ngoLwesithathu.
Nceda unxibelelane nathi ukuba ufuna ikhadi le-antigen le-COVID-19.